***TACSI, Waxaa Aad Iiga Nixisey Geeridii Ku timi Alaha U Naxariistee Asli Xuseen Ciise Aadan Oo Ku Geeriyootey Shil Baabuur oo Ka Dhacay Dalka Mareykanka, Waxaana Tacsidaa U Direynaa Dhaamaan Ehaladii iyo Dadkii Ay Ka Geeriyootey I laahey Sabir Iyo Iimaan Ka Siiyo..(Aamiin).***
<!-Dit is het middensectie links.->
Laanta af soomaliga BBC
<!-Dit is het middensectie center.->
Welcome To Guuleed Homepage:
Ciidamada General Morgan Oo Dib Uqabsadey Baardheere
Guuleed Mohamed Osman
Ciidamo Aad U Xoog badan oo uu hogaaminayo General Morgan ayaa la sheegey iney shaley 15:00 qabsadeen magaalada Baardheere ee ku taal koonfurta dalka soomaaliya. Magaaldaa waxaa laba beri ka hor si kadis ah ku qabsadey isbahaysiga xaaraanta ah ee la magacbaxay dooxada jubba, oo ay taageerto kooxda carta iyo alitaxaad.
Ciidanka jabey ee kooxda carta waxaa hogaaminayey, Bare hiiraale iyo Cabdirisaaq cali bare, labdauba sida uu wariyaha nooga soo waramey inoo sheegey waxay ku fakadeen faro cidi leh. Waxaa halkaa uga carareen sedex technico an iyo qalaba war is gaarsiinta.
Waxaana halkaa ku dhintey dad farabadan oo reyid ah, oo ciidanka xaaraanta ahi markey kabaxayeen magaalada ay sii xasuuqeen.Dadkaa waxaa u badnaa haween iyo cuur yaryar.
Wixii warah oo Nasoogaara Waan Idiin Soogudbineynaa.